musha >Products >Pool fence
Pachizivo fence inogona kunge iri fence yakaiswa kumativi emadziva ekugezera, kuti iite chigadziro chekudzivirira kukwanisa kwevana vaduku, 0-5 makore kumvura yokushambira. masvingo ekushambidza mabhesheni anofanira kunge ane gedhi rekuvhara uye rinozvidzivirira kuti riite maererano nemitemo yenyika dzakawanda nemitemo.
Kushambira dziva rakagadzirirwa rakagadzirirwa saka vaduku vaduku havagone kukwira pamusoro pavo kana kuisa pasi pavo. ivo vakaita fekitari-yakagadzirwa nemitemo yakasimba kuti igare yakasimba, yakasimba uye isingasviki.
Munyika dzakawanda maitiro, kuumba uye kuisa masvingo ekugezera kushambidza kuInternational Code Councils (ICC).
PVC purasitiki yakachena yakashandiswa padziva fence picket fence yekushambadzira dzimba
Top Quality PVC Swimming Pool Zvokuchengetedza Fence picket fence aluminium fence
Top Quality Vinyi Swimming Pool Safety Fence nzira yekuisa fence post
Kutamba Pool Fence
Iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti danda rako rinowirirana nemitemo yeguta neyekuchengetedzwa kwehupfumi yekugara kunzvimbo dzekushambira.
Your Superior Fence Company yeguta reguta rinotarisa chisarudzo chekushambidza fence chinosangana nehurumende uye chizvarwa chemunharaunda asi ichipa musanganiswa chaiyo wehutano nekuchengeteka. Nzvimbo dzokugara dzinoshambira dzinodiwa kuti dzichengetedzwe nechisungo chairo zvishoma paupamhi mamita mana, nekunze-kubhururuka, kuzvivhara uye kudzivirira-masuo masuo. Zvikwereti pasi pefambo kana pakati pekuvhara slats kana rairi zvinofanira kuva zvakaringana zvishoma kuti zvimire bhora reine-inch kuti isapfuure kuburikidza navo. Midzi uye hurumende dzehurumende dzinogona kunge dziine zvimwe zvido zvekuda, segungwa rekuchengetedza rinovhara uye maaramu. Sezvo nzira sekushandisa zvinhu, iwe une maitiro akasiyana-siyana ezvakanaka zvekuchengetedza nekuchengetedza danda yekushambidza kwako.
Nyika, nyika nemasitendi panguva dzakasiyana-siyana dzine mitemo yakasiyana zvakasiyana-siyana maererano nemitemo yekudzivirira masvingo, kubva pamitemo isina kunyanya kumira mitemo yakasimba uye mapurogiramu ekuongorora.
Nzvimbo yakachengetedzwa yekudzivirira dzimba yakanyatsogadzirirwa senharaunda ye natatorium kubatsira vana vechirwere kubva pamvura yakasununguka nekuwedzera kuvhara kunotenderedza natatorium yako. Dziva redu rekuvhara maitiro rinogona kuwedzera kuisa self-latching, key-lockable, self-closing masango kuti zvive nyore.
Dare redu harizobvaruri, kupera kana kupera, uye vaduku havagoni kungoputika kana kukwira kwavari. Ichokwadi, tine chido chekupa zvakanakisisa unhu hwakanyanya kuongororwa uye hutsika pamusika. Masvingo edu echidziro akavimbika uye akasimba kunyange mukati memamiriro ezvinhu akaipisisa.
Kusiyana nedzimwe nzvimbo dzakasarudzwa, nzvimbo inoshandiswa yekuchengetedza fence inoshanda chero ipi zvayo yedhava. Vane technicians vedu vakadzidziswa kuisa muzvikamu zvezvikamu zve-15-tsoka dzemakamuri masvingo mukati mekugadzirisa kwakakushandira iwe-kana kusununguka-kumira kana kusanganisira zvivako zvekare, semasvingo.
Kana uchinge waiswa mukati, dzimba rinobviswa rinodzivisa rinopa nyore uye nyore nyore kusvika kune yako natatorium uye yakananga kubvisa uye kutora.
Vashandi vedu vanogadzira vanobatana nedhigirii chirongwa chakasimba chechirongwa kuitira kuti tiite mitemo yedu. Kana vachinge vari kubasa, vakagadzirira kuda nyanzvi yekuisa dziva refence zvachose pane zvese zvakagadzirirwa pasi pedziva rako.
Pose-yakachengetedzwa Padziva Fence
Masvingo edzimba uye mambure neWose-Safe zvinoshandiswa nyore nyore kushandisa zvibvumirano zvinobvisa zvinopa kuvimbika uye ndezvekuchengetedza kwekuchengetedzeka kwekuchengetedza padziva rako kana spa. Zvose-Simba yakachengetedzwa inoumbwa yakasimba yakajeka meshiti yakakura murairo neye ndege-grade grade aluminium. Zvose-dzakachengeteka dziva mambure zvipfeko zvakakonzerwa ne-ultra-strong polythene twine kuti vechidiki havagoni kuputika pasi kana kuwira pasi. imwe neimwe yezvipingamupinyi inowanzomiswa chete (nevakuru chete) uye yakavharidzirwa kuti ikwanise kuchengetedzwa.
Zvose-Dziva rakachengeteka rinovhara rinowanika mumhando mitatu kuti uchengetedze dziva rako kamwe chete risina kushandiswa, ravhara marara, uye kunyange rinoshanda maitiro. Zvose zvekuchengetedzwa kwekuchengetedza ndiyo tsika yakagadzirwa kusvika pachiyero uye kuenzana kwechidimbu chako uye kuiswa nevashandi vomunharaunda.
Dziva rako rinowanzova chinhu chinonakidza kune wako kunze kwemasuo, zvisinei kuti zvakakosha kuti zvirege kungooneka zvisizvo, zvisinei kuti zvakabatana zvakavharwa zvakachengetedzwa uye zvakachengeteka.
Kusarudza yakarurama dziva fence panels ichaita kuti nzvimbo yako yakachengetedzeka yakachengeteka kuti munhu wose ashandise uye anopindira kupinda kune yakasara kunze kwekugara nzvimbo yako.
Pachizivo fence panels inofanira kunge iri yakakwirira uye imwe nzvimbo yakananga kubva padziva pachayo. Kana fence ine makateteti inofanirwa kuvharwa zvakakwana apo mwana aisagona kuvhara. Nzvimbo idzi dzinofanirwa kunge dzisingave dzakagadzikana kana kuti zvikwangwani zvinenge zvichishandura mwana kukwira pamusoro pefence uye masuo anofanira kunge ari oga-akavhara uye anoona.
Kunyange zvazvo iwe uine dziva refence kungava chikonzero chezvikonzero zvekuchengeteka, hazvifaniri kukanganisa kuronga kwako kunze kwemukati. Masvingo anowanikwa kupararira kwezvigadzirwa uye zvinhu uye pvc uye vinyl. iwe uchakwanisika kunyange kutenga magirasi emakirasi, izvo zvinokubvumira kuti uvhare dzimba rako zvakanaka asi usingaiti kuverenga.
Kuisa dzimba dzefence panzvimbo iwe pachako unowedzererwa uye unotambudza uye unoisa pangozi yekuumba zvikanganiso zvinoreva kuti dziva rako haringavi rakachengeteka. zviri nani kukurudzira dziva rako refence rakaiswa nekambani yeruzivo. Zvizhinji zvehurumende zvinogona kupa mitsara isina ruzha usati waibhadhara uye unogona kunge wakagadzirira kupa kupararira kwepenji dzefence. Fence panels inowanikwa nekambani inyanzvi inofanira kusanganisira pamwe chete chivimbiso chekugadzirisa icho chichakudzivirira iwe pamatambudziko.
Kuisa firati ye natatorium kunogona kuva kufamba kwakachenjera, kunyanya kana iwe uine vana, mhuka dzemhuka kana vakwegura kumativi ose. Inopa kuchengetedza uye inowedzera ruzivo ku natatorium yako nepamusoro.
Tevera izvi zvinenge gumi nematanho kuti ubudirire kuisa dzimba yekudzivirira iyo isingokuchengetedze iwe pabasa pamusana pekupera kwevhiki, asi iwe pamwe chete unodzivirira mari pamusoro pekubhadhara basa.
Nhanho 1 - inogara nzvimbo uye uwane Rusvingo rwakagamuchirwa
Ronga hovha kana tambo pasi pehupamhi hwemadzika maviri kusvika matatu kubva pakatanga kwedziva kuti uone kupi zvako kwaunogona kuisa fence yekudzivirira. pamwe chete mucherechedza gaphi regedhi nechoko, iyo dzimwe nguva inotanga kusvika kumahombekombe egungwa.
Dhirosa bhasi kana tambo yakasimba uye urarame kuti uregere urongwa hwehuwandu hwekuvhara iwe unoda kutenga.
Kutenga rudzi rwekudzivirira iyo inokurudzira nzvimbo yechirongwa cheimba yako pamwechete nekukupa rugare rwepfungwa uye naizvozvo kuchengeteka kwakachengeteka. Kune mhando dzakawanda dzinosvika pakuvandudzwa kwemusha kana mabhidhiyo akaita seAl, simbi, Fe uye kubata zvehuni dzinowanzova 5 kana mamita matanhatu kumusoro.
Nhanho 2 - Cut Sticks
Tora tsvimbo yako 4 netsoka refu uye urarame uye ucheke mamita matatu kureba. iyi inogona kunge iri nguva yekugara nzvimbo pakati pezvikamu zvefence. kurarama nekucheka imwe tsvimbo mairi masendimita masendimita kubva kure kubva pachigadziko chakasara, kuti urarame nzvimbo pakati pemapoka ose.
Danho 3 - Mark Drilling Holes
Shandisa chiratidzo chinodzivirira mvura kuti chicherechedza nzvimbo, kushandisa 3-netsoka uye mapaundi e-½-inch kubudisa nzvimbo yakagamuchirwa. ita izvozvo zvakapoteredza dziva. kukusimbisa iwe kurarama uye kuongorora nzvimbo yakarurama sechikonzero chako iwe ungave uine mabomba pamusoro pavo.
Nhanho 4 - Gadzirira Kuraira Mashini
Iva nechokwadi chekuti mushonga wako wekuchera unosanganisira bit simiti kumigodhi yekudonhera muhombe yako. urarame mapuranga epurasitiki akauya pamwe nefence yako yezvinhu uye akararama, akacheka uye akaisa tape yakareba yakaenzana nechekuchera kwese kwese iyo inosangana nejasi. izvi zvinogona kuita kuti iwe udzikise hupamhi hwejasi, asi usingaiti zvakadzika.
Danho 5 - Chengetedza nzvimbo yakaratidzwa
Iva nechokwadi chekuti iwe unopfeka kudzivirira maziso uye magirafu, uye tanga kuvhara masango panzvimbo dzakaratidzwa. Geza usina kushandiswa simenti uye uise mahwendefa epurasitiki mumakomba, kusundira nzira dzose pasi. Izvi zvinogona kubata mapuranga ekudzivirira, saka iva nechokwadi kuti ivo vakanyatsogadzika mumunda.
Danho 6 - Isa Ganda Fencing NEGORE
Tanga pagedhi uye uise matanda mukati mejasi. Dhonzai danda, iyo inowanzoita meshoni yakaoma pakati pavo. Shandisa nzira dzako kumativi echidziro kuti uise muzhenje.
Tsvaga kuzarura mukati mezvinyorwa zvepamiti pose paunoshuva kuisa muchiteshi chako chemvura, uye uise chitubu chemvura, chinoteverwa nesuwo. Ichi chikwata chingava chido chekuvaka kuti ave nechokwadi chokuti suo rinovhara pacharo pakarepo painovhurwa.
Jovyea inyanzvi yekugadzirwa kwechina Chinese (factory / grossist / suppliers) iyo inofunganya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwemadziro edzimba dzefodhi. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.